ကလိုစေးထူး: ကူညီကာ ဖေးလို့ မကူပေမယ့်…
Posted by ကလိုစေးထူး at 11:46 PM
tks for that post.......
i hate Than Shwe group more than i write.
very sad demonstration story.
Jun 2, 2008, 12:02:00 AM
Stupid People Destroying Country
Jun 3, 2008, 7:02:00 PM
အစ်ကိုရေးထားတာက တကယ်ထိတာပဲ။ လူတွေက မျှော်လင့်နေရတယ်.. တကယ့်တကယ်တွေ့ကြုံတာကျတော့လည်း မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ တခြားစီ။ အင်းး မလွယ်ဘူးနော်။ :(
Jun 3, 2008, 9:38:00 PM
`ဟော…၊ လာပြီထင်တယ်ဟေ့´ တစုံတယောက်၏ အော်ဟစ်သံနှင့်အတူ လမ်းဘေးမှာ အစီအရီ ထိုင်နေကြသော လူများ၏ မျက်နှာကိုယ်စီက တိုင်ပင် ကိုက်ထားစရာမလိုပါဘဲနှင့် ကားသံကြားရာဆီသို့ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်ဖြင့် ငေးမျှော်လိုက်ကြ၏။ ထိုအထဲမှာ သူလည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်အားကတော့ အတက်ကြွကြီးမဟုတ်လှ။ လူက နုန်းနေတာလည်း ပါသည်။ မနက်တည်းက နေပူကြီးထဲမှာ ရပ်ပီး နေခဲ့ရသည်မဟုတ်လား။ အသက် ၁၄ နှစ်ပင် မပြည့်လှသေးသော သူ့အတွက် ဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့ အပြိုင်လုဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို ခက်ခဲသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာရွေးချယ်စရာ မရှိပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက် မရှိတဲ့အမေနဲ့ ၆ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ညီမလေးတို့သာရှိတဲ့ သူတို့မိသားစုထဲမှာ ဘယ်လိုများ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာကို ရနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ဒါကြောင့်လည်း အဖေမရှိတော့တဲ့ ဆယ်နှစ်သားဘ၀ထဲက သူ့အတွက် ဒီဒုက္ခိတအမေနဲ့ ညီမလေးအတွက် စာသင်ကျောင်းကို ကျောခိုင်းခဲ့ရတာပဲလေ။
ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အားကုန်တိုးဝှေ့ကြတဲ့ လူအုပ်ထဲမှာ သူ့လက်ထဲဘာမှ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဟိုးရှေ့မှာ အကိုတို့ အမတို့ထက် ပိုဒုက္ခရောက်နေသူတွေ ရှိနေသေးလို့ အခုလောက်နဲ့ ကျေနပ်ကြပါနော်´ ဒိုင်နာကားနောက်ခန်းပေါ်က လူရွယ်က လူအုပ်ကြီးကို မရွှင်မလန်း မျက်နှာဖြင့် တချက်ငေးကြည့်လိုက်ရင်း တုန်ရီသော အသံဖြင့် အထက်ပါအတိုင်း ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်မရသေးဘူးဗျာလို့ သူအားကုန်အော်ပစ်လိုက်တယ်။ စိတ်တိုနေသလိုပဲ။ ဆူညံနေတဲ့ အသံကြားမှာ ကြားလားမကြားလား မသိပေမဲ့ ကားလေးကတော့ တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပါပီ။ သူစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ထိုင်ချလိုက်မိတယ်။ ငိုမိတော့မယ်ထင်တယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အမကြီးတစ်ယောက် ဒူးပြဲသွားတာကို အ၀တ်စုတ်နဲ့သုတ်ရင်း တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေတယ်။ ခုနကလုတဲ့အရှိန်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ မိန်းမကြီးနှစ်ယောက်အသံကလည်း ပိုပီးစိတ်ရှုတ်လာသလိုပဲ။ သူမြေကြီးပေါ်ကိုပဲ ပက်လက်လှန်ချပစ်လိုက်သည်။ ဘာမှမသိချင်တော့ပါ။
ဟိုနေ့တွေတုန်းကတော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေလာပီး လူတွေလာလှူတာအားလုံး သူတို့စီစဉ်ခွဲဝေမယ်လို့ အစီစဉ်တွေဘာတွေ လုပ်ခဲ့ပါရဲ့။ သူတောင် သူများလှူတာကို သူတို့က၀င်ကိုင်ဦးမယ်လို့ စိတ်ကွက်မိသေး။ အဲဒီတုန်းက သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ အလှူပစ္စည်းလေးတွေယူရတာတော့ စနစ်တကျနဲ့ မပင်ပန်းခဲ့တာကို သူခုချိန်မှ ပြန်လွမ်းနေမိသည်။
နောက်တော့ အားလုံး တန်းစီထိုင်နေတုန်း
ကျုပ်တို့လှူမှာကို ခင်ဗျားတို့ကို ဘာလို့အပ်ရမှာလဲ.. အလှူလုပ်တာတောင် လာတားနေတယ်.. စိတ်ဓါတ်တွေကတော့..
အေးလေ.. ဒီလိုနေရာတောင် မရှောင်တော့ဘူး.. ချုပ်ချယ်ချင်နေတာတော့ လွန်သွားပီ..
ခပ်မာမာပြောသံနှစ်ခုဟာ သူတို့ တန်းဆီထိုင်နေတဲ့ နေရာကတောင် အတိုင်းသားကြားနေရသည်။
ကဲ.. ကျုပ်တို့က ခင်ဗျားတို့လက်မအပ်ပဲ ကိုယ်တိုင်လှူမယ်ဗျာ.. ဘာလုပ်မလဲ ဖမ်းမလားပြော..
နီရဲခက်ထန်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ အဲဒီလူကြီးကိုပြောပီး..
အကိုတို့ အမတို့ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော့်တို့အလှူကို တားဆီးပိတ်ပင်နေသူတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရအောင်လှူမှာပါခင်ဗျ.. ကားနားမှာ လာယူပေးကြပါ။
၀ုန်းခနဲ ပြေးကြတဲ့လူတစု။ သူတို့ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေနဲ့ရော စိတ်မကောင်းမှုတွေနဲ့ပါ အလှူပစ္စည်းတွေ ဝေပေးနေတဲ့ အလှူရှင်တွေ။ မိန်းကလေးတချို့ဆို အလှူအပေါ် ကြည်နူးတာရော။ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာရောနဲ့ မျက်ရည်တွေတောင်ကျလို့။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ လူအုပ်ကြားထဲမှာ တိုးလို့ ဝှေ့လို့ပေါ့လေ။
ခုနက အသံအောင်အောင်နဲ့ ကယ်တင်ရှင်လိုပြောခဲ့တဲ့ လူကြီးအဖွဲ့ကတော့ မျက်နှာကြီးတွေ မဲပီး ခေါင်းတခါခါနဲ့ ကြည့်နေကြပါရဲ့။ သူတို့လည်း ဘာလုပ်လို့ရမလဲလေ။
ပုံမှန်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့ ဟာလေးတွေ၊ တချို့ ဟိုလူကြီးအဖွဲ့ကို ပေးခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တွေ လှူတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ ညီမလေးနဲ့ အမေ့ပါခေါ်လို့ သက်သက်သာသာ ရခဲ့ပေမဲ့ ခုလိုအလှူရှင်ကားတွေ တဝေါဝေါ အတောမသတ်ဖြတ်နေတဲ့ သူတို့နေရာလေးထက် ပိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ နေရာတွေကို အဲဒီအဖွဲ့တွေက ပိုအာရုံစိုက်ကြပါရဲ့။ ဘယ်သူလာလာမလာလာ နှစ်ရက်တစ်ခါ တစ်ယောက်ကို ဆန်နှစ်လုံးနဲ့ ငါးသေတ္တာတစ်ဗူးဝေနေတဲ့ ဟိုလူကြီးတို့အဖွဲ့သာမရှိခဲ့ရင် သူ့မိသားစု အသက်တောင် စိုးရိမ်ရမှာ အသေအချာပါ။
ဘာပဲပြောပြော မကြာခင်ရမယ်လို့ ပြောတဲ့ အထောက်အပံ့လေးတွေရရင်တော့ သူအမေတို့ကိုခေါ်ပီး ရွာပြန်တော့မည်။ ခုချိန်မှာတော့ ဒီလူအုပ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်ကလာမယ်မှန်းမသိတဲ့ ကားကိုမျှော်ရင်း။ ဘေးနားက ပြဲစုတ်နေတဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်မိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အကို့စာလေးဖတ်ပီး ရေးချင်လာတာနဲ့ အကို့ခြေဖျားတောင် မမီပေမဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ.. ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာလည်း တကယ်လက်တွေ့ ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်တွေပါပဲခင်ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော အများနဲ့လုပ်တာမှာ အခက်အခဲတွေ မလိုလားအပ်တာတွေကတော့ ကြုံရတာပါပဲခင်ဗျာ။ အကို့အမြင်နဲ့ မတူတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုပေမဲ့ တကယ့်ကို လူအများကြီးကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပါ။ ခုတော့ သူတို့တွေအားလုံးနီးပါး လမ်းဘေးမှာ မရှိကြတော့ပါဘူးခင်ဗျာ.. အစိုးရက ၀င်ထိန်းလိုက်တာပါသလို။ ထောက်ပံ့မှုတွေကိုယ်စီယူပီး ဒီစိတ်ညစ်စရာကောင်းလှတဲ့ လမ်းဘေးမှာ ပစ္စည်းလုရတာကို စွန့်ခွာပီး နေရပ်ပြန်ကုန်ကြပါပီခင်ဗျ.. အကိုပြောခဲ့သလိုပါပဲ ဒီလူတွေဟာ ဒီနေရာမှာ ရှိချင်လို့ ရှိခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာပဲလေ.. ဒါပေမဲ့လည်း စည်းကမ်းဆိုတာကလည်း လောကမှာ နေရာတိုင်း အဖြစ်တိုင်းမှာ ထားရှိသင့်တဲ့ ကိစ္စလေးပဲမို့ ကိုစေးထူးဟာ အဖက်ဖက်ကို နားလည်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ခင်ဗျာ..
Jun 7, 2008, 10:39:00 AM
ကို သတိ ပြန်ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတို ကွန်မန့်ကလဲ တော်တော်လေး ထိမိပါတယ်။ အရေးအသားကလဲ ကောင်းတော့ ဖတ်ရတာ မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်စေတယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုပုံစံနဲ့ ဆိုလိုရင်း ပုံစံမတူတာကတော့ မြင်ကြတဲ့ အမြင်မတူလို့ပါ။ ကိုသတိရေးသလို အဖြစ်တွေလဲ ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျနော် ယုံပါတယ်။ ကိုသတိရေးထားသလို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ တကယ်ပဲ စနစ်တကျနဲ့ တထိန်းတသိမ်းနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်လို့ ရှိရင်တော့ ဒါဟာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ ကြိုဆိုရမယ့် ကိစ္စပါပဲ။